ishubhu ye-alumina yesikwele - XTL
ishubhu ye-alumina yesikwele
Usendaweni efanele ye- ishubhu ye-alumina yesikwele.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe XTL.siqinisekisa ukuthi kulapha XTL.
Umkhiqizo awulethi nje kuphela ukubaluleka okungokoqobo kokuphila kwansuku zonke, kodwa futhi uthuthukisa ukuphishekela kwabantu okungokomoya nokuzijabulisa. Kuzoletha kakhulu umuzwa oqabulayo ekamelweni..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu ishubhu ye-alumina yesikwele.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
Abakhiqizi beshubhu be-alumina be-alumina be-ceramic eyenziwe ngokwezifiso Abavela e-China | I-XTL
Umumo we-Ceramic Tubing uyisikwele, unezinhlangothi ezimbili ezivulekile, ukusetshenziswa okukhethekile ku-Plasma Corona Electrode, umshini we-Spark kanye nomshini wokuhlanganisa. Imininingwane ye-square alumina ceramic tube ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho.Imininingwane yomkhiqizo:1.Material: 95% 99% alumina ceramic.2.Melana nezinga lokushisa eliphezulu:1600℃ kuya ku-1800℃.3.Kungenziwa usayizi wamashubhu ngokwezifiso kanye neshubhu: yebo.